ကိုယ့်ဘေးကလူတွေမှာ COVID ပိုးမရှိနိုင်ဘူးလို့ ဘာလို့ စိတ်ချလက်ချ ယုံကြည်နေတာလဲ - Hello Sayarwon
ကိုယ့်ဘေးကလူတွေမှာ COVID ပိုးမရှိနိုင်ဘူးလို့ ဘာလို့ စိတ်ချလက်ချ ယုံကြည်နေတာလဲ
COVID-19 ကပ်ဘေးကြီးက မပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ ပြည်တွင်းမှာ ပိုးကူးစက်နှုန်းကျဆင်းလာသလို နိုင်ငံတကာမှာလည်း ကာကွယ်ဆေးတွေပေါ်ထွက်လာတာမို့ စိတ်ပူပန်မှု အတန်ငယ်လျော့လာနေကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တဖက်မှာလည်း မျိုးဗီဇဆင့်ကဲပြောင်းလဲကာ ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ မျိုးစိတ်သစ်တွေ ပေါ်ထွက်လာနေသလို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကူးစက်မှုနှုန်းနဲ့ သေဆုံးမှုနှုန်းကလည်း လျော့ပါးကျဆင်းလာတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး။ ပိုဆိုးတာကတော့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ တန်ကြေးက မြင့်မားတာမို့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို လုံလုံလောက်လောက်ဖြန့်ချိနိုင်ဖို့ ၄ နှစ်လောက်အထိ အချိန်ယူရနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေမယ့် ပြည်တွင်းကလူတွေအကြားမှာတော့ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုပိုင်း အားလျော့လာတာတွေကို သိသိသာသာမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေ အတန်အသင့်ပြန်ဖွင့်လာတာမို့ ရုံးတက်ရုံးဆင်း လုပ်ကိုင်သွားလာနေရတာမျိုးတွေ ရှိလာသလို ဒီအတိုင်း အပျော်သဘော အပြင်ထွက် နေကြသူတွေလည်း မနည်းမနောပါပဲ။ လက်ရှိအချိန်မှာက အပြင်ပြန်ထွက်တာ၊ Mask မတပ်တာတွေ၊ Social Distancing မလုပ်တော့တာတွေနဲ့ ပြန်လည်အသားကျနေကြပြီလို့ ဆိုရမယ့်အချိန်ပါ။
အားလုံးက ပုံမှန်အခြေအနေတစ်ရပ်လို ပြန်လည် သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေကြပြီဖြစ်သလို လူငယ်တွေဆိုရင်လည်း အပြင်ထွက်လည်ပတ်တာတွေ၊ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ စားသွားလာကြတာတွေ ပြန်လုပ်လာနေကြပါပြီ။ Night Life တွေတောင် တစ်စတစ်စပြန်ပြီး အသက်ဝင်လာနေပြီမဟုတ်လား။
လူစုလူဝေးတွေ မလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတာမို့ Crowd ဖြစ်တဲ့ လူစုလူဝေးတွေ မရှိသလောက်ဖြစ်လာပေမယ့် တခြားနည်းလမ်းနဲ့ လူစုလူဝေးတွေတော့ ရှိနေဆဲပါ။ လမ်းမတွေ ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာလို အမြောက်အများစုဝေးနေတာမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေစုဝေးပြီး အပြင်သွားကြတာမျိုး၊ ချစ်သူရည်စားနဲ့ ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးဖွင့်တဲ့ ဆိုင်တွေမှာ သွားရောက်စားသောက်တာမျိုး၊ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် Nightlife တွေမှာ ပြန်ကဲနေတာမျိုးတွေပါ။
ဒီတော့ မေးစရာရှိလာတာက ကိုယ်ရင်းနှီးရတဲ့သူဆိုရင် ပိုးမရှိနိုင်ဘူးလား? ကိုယ့်ဘေးနားကလူက Mask တပ်၊ လက်ဆေး၊ Social Distancing လုပ်တဲ့သူဟုတ်/မဟုတ်ဆိုတာကို ဘာကြောင့် သံသယမဝင်ကြတာလဲ? ကိုယ့်ဘေးမှာ အနီးကပ်ဆုံးရှိနေတဲ့သူတွေက ပိုးမရှိဘူးဆိုတာ ဘာကြောင့် ဒီလောက်သေချာနေရတာလဲ?
လူတိုင်းက ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးသူတွေ၊ ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ မိသားစုဝင်တွေ၊ ချစ်သူခင်သူအပေါင်းအသင်းတွေဆိုရင် ပိုးရှိမရှိကို လုံးဝနီးပါး သံသယမဝင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရသူတွေရဲ့ အများစုဟာ ကိုယ်နဲ့အနီးကပ်ရှိနေသူတွေကြောင့် ပိုးကူးစက်ခံခဲ့ကြရတာပါ။
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် လူအတော်များများက ဒီအချက်ကို မေ့ပစ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးသူနဲ့ အတူရှိနေရင် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေရော၊ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေကိုရော သတိမရကြတော့ပါဘူး။
စိတ်ပညာသဘောအရ လူတိုင်းဟာ ကိုယ်ရင်းနှီးတဲ့သူတွေအပေါ် ယုံကြည်မှု အတိုင်းအတာတစ်ခုစီ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ၊ ဘေးဒုက္ခတွေ၊ အန္တရာယ်တွေဟာ အဝေးကနေသာလာမယ်၊ တစိမ်းတစ်ရံစာတွေဆီကနေသာလာမယ်လို့ မှတ်ယူထားတတ်ကြတာ လူ့သဘောပါ။
ဒါကြောင့် COVID-19 ရောဂါဟာ လူလူချင်းကူးစက်တဲ့ရောဂါဆိုတာကို အပြည့်အဝသိနားလည်ထားတာတောင်မှ ကိုယ့်ဘေးနားကလူတွေဆီမှာ ဒီလိုဘေးအန္တရာယ်မျိုးရှိနေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မသိစိတ်က ယုံကြည်နေကြတာပါ။
များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ဘေးကလူတွေဆီမှာ ပိုးရှိမရှိကို ဘယ်သူမှ ထုတ်မမေးကြသလို တစ်ချို့ဆိုရင် စိတ်ထဲမှာတောင် သံသယမရှိတတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် သမီးရည်းစားတွေဆို ပိုဆိုးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လူမှုဗေဒသဘောအရဆိုရင် လူအများစုဟာ လူစုလူဝေးဖြစ်နေတဲ့ နေရာကို မရှောင်နိုင်ကြဘူး။ စိတ်ဝင်စားကြတယ် စပ်စုချင်ကြတယ်၊ သွားချင်ကြတယ်၊ ပူးပေါင်းချင်ကြတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့သူတွေ၊ ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေနဲ့ လူစည်တဲ့နေရာတွေဆီကို ရောက်သွားကြတော့တာပါပဲ။ ဒါကိုက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်ပျက်မှုတစ်မျိုးပါ။ စိတ်ဝင်စားလို့လည်း မဟုတ်ဘူး၊ အဖြစ်အပျက်ကို လက်ခံအားပေးလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ မသိစိတ်က စေ့ဆော်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ သဘာဝအပြုအမူတစ်မျိုးဆိုပါတော့။ လေ့လာချက်တွေအရဆိုရင် ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ခါနီးမှာ ချင့်ချိန်စဉ်းစားလေ့ရှိသူက ၁၀% သာရှိပါတယ်တဲ့။
ကိုယ့်ဘေးနားကလူတွေက လုံခြုံမှုရှိတယ်၊ စိတ်ချရတယ်၊ အန္တရာယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ထူးခြားလှတဲ့ မသိစိတ်ရဲ့ စေ့ဆော်မှုတစ်မျိုးကြောင့် ယုံကြည်မှုလွန်ကဲပြီး ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူနဲ့ဆို ကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေလဲ အပြင်ဆိုလည်း ထွက်လိုက်တာပဲ၊ Mask မတပ်ပဲလည်းနေလိုက်တာပဲ၊ ဖက်လဲတကင်းလဲနေလိုက်တာပဲ၊ ဟိုဆိုင်ဒီဆိုင်ဆိုလဲ သွားလိုက်တာပဲဆိုတာတွေ ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။
မြင်ရုံနဲ့ ပိုးမရှိဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး
အသက်ရှုလမ်းကြောင်းနေတဆင့် လေထဲကို ပြန့်နှံ့နိုင်တဲ့ COVID-19 ရောဂါပိုးဟာ ကိုယ့်အနီးဝန်းကျင်က ဘယ်သူ့မှာမဆို ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘယ်သူနဲ့မဆို၊ ကိုယ်ဘယ်လောက်ယုံကြည်ရသူနဲ့ မဆို အပြင်ကနေလာသူတိုင်းနဲ့ တွေ့ဆုံဆက်ဆံရာမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ဆက်လက်လိုက်နာဖို့ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ စိတ်ချရတဲ့ Mask ကို တပ်တာ၊ လက်ကို ပုံမှန်ဆေးကြောတာ၊ Social Distancing လုပ်တာမျိုးတွေပေါ့။
ဒီနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာပြီး ခင်မင်ရင်းနှီးသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံနိုင်ပါတယ်။ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြင်သွားလာတာကိုတော့ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Stay at Home ကာလအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာဟာ လိုအပ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာဖို့ နောက်ထပ် နှစ်ဝက်လောက်စောင့်ဆိုင်းရဦးမယ့် အခြေအနေမျိုးပါ။ ဒီကာလမျိုးမှာ စည်းကမ်းလိုက်နာပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့သာ ကြိုးပမ်းရမှာပါ။ ချစ်သူခင်သူတွေကို ယုံကြည်တာက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့။
Social Distancing နဲ့ ဘာကိုရှောင်လို့ ဘာကိုဆောင်ကြမယ်
Stay Home ကလွတ်တာနဲ့ ဘား သွားထိုင်ချင်ကြတဲ့ အသောက်တလိုင်းတို့ သတိပြုမိဖို့